Sibuyela emsebenzini isikhulu sakwa-SARS ebesimisiwe – LIVE Express
Uzobuyela kwa-South African Revenue Service (SARS) kuleli sonto uJonas Makwakwa kulandela ukuphuma phambili ezinsolweni abebhekene nazo.
“U-SARS ungathanda ukukumemezela ukuthi ngemuva cishe konyaka emisiwe, iChief Officer: Business & Individual Tax (BAIT), uMnumzane Jonas Makwakwa, uzobuyela enhlanganweni kusukela ngomhlaka-1 November 2017,” kusho le nhlangano yabaqoqi bentela ngoMsombuluko.
Ukumiswa kukaMakwakwa kweza ngemuva kokuthi iFinancial Intelligence Centre (FIC) yanika u-SARS umbiko oqukethe izinsolo eziqinile ngo-Makwakwa. Lokhu kwaholela ekutheni uCommissioner Tom Moyane amumise emsebenzini kuze kuba kuphothulwa uphenyo oluzimele ngalezi zinsolo.
Inkampani yababeli iHogan Lovells iyona eyaqokwa ukuze iphenye lolu daba neyancoma ukuba uMakwakwa aqondiswe izigwegwe.
U-SARS uthi utholakale emsulwa kuwo wonke amacala abebekwe wona. Manje usezobuyela kwa-SARS esikhundleni sakhe njenge-Chief Officer.
Umphakathi unxuswa ukuba ulekelele kwesokubulawa kweSekela likaThishanhloko